Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey shirka Sharm El Sheikh lana kulmay madax kale Sawirro – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka khudbad ka jeediyey shirka caalamiga ah ee dhaqaalaha iyo maalgashiga Masar oo ka socda magaalada Sharm El Sheik.
Madaxweyne Xasan oo ka mid ahaa madaxda tirada badan ee caalamka ee shirka lagu casuumey ayaa ugu horeyntii ku ammaaney Masar dhabbada ay hayso ee dhinaca qaabeynta mustaqbalka dhaqaalaha dalka oo uu sheegay inay ka faa’idi doonaan waddamada Carabta iyo qaaradda Afrika.
‘’Waa muhiim in waddamadeena ay horumariyaan siyaasad qeexan oo lagama maarmaan u ah kobcinta maalgashiga shisheeye iyo kan gudaha, waxayna taasi kaalin muuqata ka qaadaneysaa dhaqaalaha oo kordha. Waxaan dhammaanteen halkan isugu nimid inaan isweydaarsano fikrado la xiriira qaabka aan himiladaasi ku gaaro karno iyo inaan ka sii taxaddarno caqabadaha naga hor imaan kara iyo sida looga gudbi karo’’, ayuu yiri Madaxweyna Xasan Sheekh Maxamuud”.
Tahriibeyaal lagu qabtay xeebaha Puntland